သစ္စာတရားကုထုံး၊ သံသရာဒုက္ခသည်များအတွက် ဒုက္ခသည်စခန်း (အနတ္တဆောင်းပါးများ-၁) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Buddhism » သစ္စာတရားကုထုံး၊ သံသရာဒုက္ခသည်များအတွက် ဒုက္ခသည်စခန်း (အနတ္တဆောင်းပါးများ-၁)
သစ္စာတရားကုထုံး၊ သံသရာဒုက္ခသည်များအတွက် ဒုက္ခသည်စခန်း (အနတ္တဆောင်းပါးများ-၁)
Posted by True Answer on May 13, 2011 in Buddhism, Community & Society, Myanma News, News, Science & Religion, Society & Lifestyle |9comments
သစ္စာတရားကုထုံး (သို့) သန်လျှင်သဘာဝရိပ်သာနှင့် ပတ်သက်ပြီး ယောဂီအများမှ ပေးစာများကို စုစည်းတင်ပြထားသော တရားစာအုပ်လေး ဓမ္မဒါန မျှဝေအပ်ပါသည်။
ဤစာအုပ်တွင် သံလျှင် သဘာဝရိပ်သာ (ဆူနာမီ) ဆရာတော် ဦးဥတ္တမသာရ ၏ ကူညီမှုကျေးဇူးကြောင့် ဆန့်ကျင်ဘက်အဆိုးတရားများဆီမှ အကျိုးကျေးဇူးများ ရယူနိုင်ခဲ့သော ဝေဒနာရှင် လူမမာများ၊ ….
တရားရှာရင်းတရားပျောက်နေသော ယောဂီများ နှင့်
သန်လျှင်သဘာဝရိပ်သာဆရာတော်၏ လမ်းညွှန်မှုဖြင့်……… မိမိတို့ ဘ၀ အခက်အခဲ …ပြဿနာများ ၊ ရောဂါများ ကို မှန်မှန်ကန်ကန် အသုံးချတတ်ခြင်းကြောင့် အဆိုးဆုံး အခြေအနေများမှ လွန်မြောက်ကာ…..အကောင်းဘက်ဆီသို့….. ဦးတည်လာပုံကို….. မိမိတို့ဖြစ်ရပ်မှန် အတွေ့အကြုံများ နှင့် ယှဉ်၍ အမှန်တရား-သစ္စာတရားကို ၄င်းတို့ ဥာဏ်မီသလောက် အများသိရှိ သဘောပေါက်စေရန် တင်ပြထားကြလေသည်။
မဖတ်ဖူးလို့ စာအုပ်မှာ ဘယ်လိုအတွေ့အကြုံတွေ ဖေါ်ပြထားတယ် မသိပေမယ့် ကျွန်တော့်ဘ၀မှာ သစ္စာဆိုပြီး ဆုတောင်းတာ သုံးကြိမ်လောက်ပြုဘူးပါတယ်။ ပြည့်လဲ ပြည့်ဝခဲ့ပါတယ်။ သာမန် အသေးအဖွဲကိစ္စတွေမှာတော့ သစ္စာဆိုလေ့မရှိပါဘူး။ သေရေးရှင်ရေးကြမှသာ သစ္စာဆိုပြီးဆုတောင်းပါတယ်။ ပြည့်ဝဖူးတဲ့အတွက် ယုံလဲ ယုံကြည်ပါတယ်။
သန်လျင်သဘာဝရိပ်သာက ဘယ်နားမှာလဲ? လိပ်စာသိချင်ပါတယ် …
weiwei ပြောတာမှန်ပါတယ်…. လိပ်စာလေးများသိရင် ပြောစေလိုပါတယ်….
Thanlyin Township, (Near Tar Wa University),
Yangon, Myanmar. (95)056-22707, (95)09-5085212,
တာဝတက္ကသိုလ်အနီး၊ (တာဝ တက္ကသိုလ်မရောက်မီ တစ်မှတ်တိုင် ညောင်ပင်မှတ်တိုင်တွင်ဆင်း၍ ရွှေပေါ်ကျွန်းမုဒ်ဦး လမ်းသို့ဝင်ပါ) ဖုန်း- ၀၆၅-၂၂၇၀၇ ၊ ၀၉၅၀၈၅၂၁၂
ဘာကြောင့် ဆူနာမီဆရာတော်လို့ အမည်တွင်သလဲဆိုတာ သိလိုပါသည် ကိုစိုးဝင်းထွဋ် ခင်ဗျား။ ၂၀၀၅ တုန်းက ထိုင်းမှာဖြစ်သွားတဲ့ ဆူနာမီအပြီးမှာ အခုဘွဲ့နာမည်တွင်တယ်လို့ ဝိုးတဝါးမှတ်ထားဖူးပါသည်။ ဆရာတော်၏ ဆိုဆုံးမချက်များသည် အလွန်ကျေးဇူးများပါသည်။
သန်လျင်က အသိတစ်ယောက်ကို မေးကြည့်တော့ သဘာဝ ဓမ္မရိပ်သာလို့ လူသိများပါတယ်တဲ့ … အသက်ကြီးတဲ့သူတွေ ဂီလာနတွေ သေခါနီးလူနာတွေကိုပါ လက်ခံပါတယ် … အဖွဲ့အစည်းအကြီးတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့လဲ သိရပါတယ် …
ဘိုးဘွားရိပ်သာက လက်မခံတဲ့ အဘိုးအဘွားတွေကို လက်ခံစောင့်ရှောက်ထားတဲ့ ရိပ်သာတစ်ခုဖြစ်ပါတယ် ….
ကျွန်တော်တို့ သိတာတော့ ရွှေပေါ်ကျွန်း ဆရာတော်လို့ပဲသိတယ် ..ဆူနာမီဆရာတော် ဆိုလို့ မကြားဘူလို့ငြိမ်နေတာ……:)
>>ဟုတ်ပါတယ် ကို BIG CAT ခင်ဗျာ။ ဆရာတော်ဟာ (၁.၆.၂၀၀၀)တွင် အ၀ိဇ္ဇာမှဝိဇ္ဇာသို့ တရား အလှူတော်လုပ်ငန်း ကို ၃၈ လမ်းမှာ ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၀ိပဿနာတရားနှင့် ပတ်သက်သော တရားစီဒီ၊ ကက်ဆက်ခွေ၊ ဗွီဒီယို စီဒီခွေများကို အခမဲ့ ငှားရမ်းကာ၊ ကူးယူ ဖြန့်ချီပေးခဲ့ပါသည်။
ဗွီဒီယိုခွေများ ဓမ္မဒါနပြု ဖြန့်ချီရာတွင် လူအများ သံဝေဂ တရားရပြီး တရားအားထုတ်မှုတွင် စိတ်ဝင်စားလာစေရန်ရည်ရွယ်လျှက် သေခါနီးလူမမာများ၊ ဆေးရုံမှလူသေများ၊ DISCOVERY မှ တိရစ္ဆာန်များ၏ နိုင်ရာစားဘ၀များ၊ စကြာဝဠာသဘာဝတရားဖြစ်ပုံပျက်ပုံများ၊ ပဋိသန္ဓေနေမှု၊ အိုမှု၊ နာမှု၊ သေမှု သိပ္ပံသဘာဝများ၊ သဘာဝကပ်ဘေးများ၊ ဗုဒ္ဓ၀င်ဇာတ်လမ်းများ၊ အကျဉ်းထောင်တွင်းတရားအားထုတ်မှုများ၊ စသည်ဖြင့် နောက်ခံထားလျှက် ဆရာတော့်တရားအသံထည့်သွင်းကာ ဖြန့်ချီခဲ့ပါသည်။
ထို တရားဗွီဒီယိုခွေများအနက် ဆူနာမီကပ်ဘေးကို နောက်ခံထားလျှက် ဆရာတော်ဟောကြားသောတရားဗွီဒီယိုခွေများမှာ ၂၀၀၅ ခုတွင်လူကြိုက်များကာ ကူးယူကြပြီး တခြားလူများကပင် စီးပွားဖြစ် ကူးယူရောင်းချကြပါသည်။
တရားခွေတွင်..ဆူနာမီကပ်ဘေးကို နောက်ခံထားပြီး တရားဟောသော ဆရာတော်ကို ဆူနာမီဆရာတော်ဟု အလွယ်ခေါ်ကြရာမှ ဆူနာမီဆရာတော်ဟု ခေါ်ကြပါသည်။ အရင်ကတော့ အ၀ိဇ္ဇာမှဝိဇ္ဇာသို့ တရား အလှူတော်လုပ်ငန်း ကို ဖွင့်ပြီး တရားအလှူလုပ်သဖြင့် အ၀ိဇ္ဇာမှဝိဇ္ဇာ ဆရာတော်ဟု ခေါ်ကြပြီး ယခု 45လမ်းနှင့် သန်လျင်တွင် …သဘာဝရိပ်သာတရားစခန်း ဖွင့်ထားသဖြင့် သန်လျင်သဘာဝရိပ်သာဆရာတော်ဟုလည်း သိကြပါသည်။
ဆရာတော်ဖြန့်ချီခဲ့သော သေခါနီးလူမမာများ ဗွီဒီယို တချို့ကို http://kodiamond.multiply.com/video?&=&page_start=80 တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။